Arzantina: We Media 2008 ao Buenos Aires · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Avrily 2019 3:48 GMT
Notontosaina voalohany indrindra tany Amerika Latina ny fihaonambe We Media, ny tanànan'i Buenos Aires, Arzantina no nampiantrano izany ny 14 ka hatramin'ny 15 Oktobra 2008. Mikarakara fihaonambe isan-taona ao Miami ny vondrona mpandinika media iFOCOS, ary niaraka tamin'ny gazety Clarín, nentina tany Arzantina ny fihaonambe. Mpitarika media, mpandraharaha amin'ny aterineto, bilaogera, ankoatra ny hafa no nivory tao amin'ny Mozean'ny Zava-kanto Amerikana Latina tao Buenos Aires (MALBA amin'ny teny Espaniôla) mba handre ireo mpandray fitenenana marobe momba ny lohahevitra toy ny “Media sy ny Bilaogy”, “Aterineto, Haivarotra sy ny Fiarahamonina” ary ny “Fifandraisana, Taranaka Vaovao sy ny Fiarahamonina Antserasera.”
Sary avy amin'i Jorge Gobbi, nampiasaina teo ambanin'ny Creative Commons license.
Noho ny habetsahan'ny bilaogera tonga tao amin'ny efitrano fivoriana amin'ny maha-mpanolotra sy mpanatrika azy ireo, dia nisy ny fitantarana mivelatra be momba ny hetsika. Ny gazety ao Buenos Aires, Clarín ohatra namoaka lahatsoratra tao amin'ny tranonkalany antsoina hoe “Miresaka momba ny We Media Buenos Aires [es],” izay nanome angona rohy mankany amin'ny bilaogy sy fampahalalam-baovao momba ny hetsika. Misy ny lahatsoratra bilaogy nosoratan'i Martín avy ao amin'ny Botón de Inicio [es], izay nanoratra hoe “We Media avy amin'ny tontolon'ny Twitter Arzantina [es],” izay namoahany vaovao maro, ary heveriny fa sioka tsara indrindra avy ao amin'ny We Media.
Lohahevitra noresahana matetika ihany koa ny hoe tanora ao amin'ny fampitam-baovao, anisan'izany ilay bilaogera an-tsary eo an-toerana (floggger) antsoina amin'ny solon'anarana hoe La Cumbio [es], izay matetika noresahana nandritra ny hetsika roa andro, ho toy ny ohatra amin'ny toe-tsaina, fahaizana ary fahombiazana. Nanasa azy hanatrika ny hetsika, miaraka amin'ireo tanora bilaogera ny mpikarakara ny fihaonambe mba hizara vaovao momba ny fomba ampiasan'izy ireo ny aterineto sy ny rindrambaiko sosialy hafa. José ao amin'ny E-true [es] tamin'ny lahatsorany: Bonus We Media: Tanora [es] nanoratra momba ny fehin-kevitra tamin'ny adihevitra:
-Olon-tsotra manana toetra miavaka izy ireo ary mamaritra azy fa hita amin'ny tontolo virtoaly sy ny tena izy ao anatin'ny fotoana iray. Tsy misy planeta hafa. Manao izany isika rehetra rehefa miditra aterineto.
– Tsy mahatakatra azy ireo ny media. Manoratra izay tiany momba ny fiainany izy ireo. Ankoatra izany, mametraka azy ireo amin'ny fomba diso. Tsy fahampian'ny fahalianana na tsy fahampian'ny fampahalalam-baovao?
– Tsy zava-mahagaga izy ireo, tsy “isika”, “izy ireo”, na “olon-tsotra” izy ireo, mitovy isika rehetra, samy manana ny toetrany.
Ao anatina lanonana iray, izay avy amin'ny orinasan'ny fampahalalam-baovao goavana, sampan-draharahan'ny dokambarotra, bilaogera na liana amin'ny lohahevitra ny ankamaroan'ny olona, nampiseho ny zatovo fa tsy zavatra atahorana izy ireo. Tsia dia tsia.
Na izany aza, tsy ny rehetra no miombon-kevitra. Federico ao amin'ny Dotpod [es] nanoratra hoe:
Zava-dehibe ny mametraka fanasongadinana manokana amin'ny zavatra azo tsapain-tanana, satria zavatra mahazatra ny fanaovan-gazety sy ny bilaogy, tsy dia nanisy lanja ny tontolon'ny bilaogy ny sasany tamin'ireo mpandray fitenenana ka tsy dia hita tsara. Tenembaum, ohatra, nanomboka niresaka momba ireo blaogy, ary avy eo nanafangaro azy ireo tamin'ilay flogger malaza “Cumbio”, izay ho ahy manokana, toa somary manimba, ary toa lasa toy ny sari-pika miresaka an'io zazavavy io izany xD.
Andrés avy amin'ny Unblogged [es] manoratra momba ny fandraisan'anjaran'ilay mpanoratra ato amin'ny Global Voices avy any Argentina, Jorge Gobbi:
“Vondrom-piarahamonina nifandray sy vahoaka tsara fandaminana”, miaraka amin'i Jorge Gobbi ao amin'ny Global Voices, Juan Cruz Mones Cazón ao amin'ny Idealistas.org sy Paulien Osse ao amin'ny Wage Indicator Foundation. Samy niresaka momba ny tetikasa izay andraisan'izy ireo anjara izy ireo, ary tsy isalasalana fa nitondra ny loka nody ny Global Voices, satria nivantana voalohany tany amin'i Gobbi ny ankamaroan'ny fanontaniana. Ny Global Voices dia tambajotran'ireo mpiara-miasa manerana izao tontolo izao izay mandray ny fampahalalam-baovao amin'ny bilaogy amin'ny fiteny samihafa avy amin'ny firenena tsirairay, ary adikan'ny vondrona mpiara-miasa avy amin'ny fiteny samihafa. Ao Arzantina, Jorge no hany mpirotsaka an-tsitrapo mamoaka lahatsoratra.
Ho an'ireo liana, jereo ny lahatsoratra avy amin'ny Clarín, vakio ireo fanehoan-kevitra ao amin'ny bilaogy, ary jereo ao amin'ny Flickr pool ny sary nandritra ny hetsika.